I-8 yeyona antivirus yasimahla yokukhusela ikhompyuter yakho kwizisongelo | Iindaba zeGajethi
Ngaba ujonge iantivirus yasimahla? Kangangexesha elithile ngoku, kukhangeleka ngathi sisonka sethu semihla ngemihla ukumamela iindaba ezinxulumene neehacks kwiinkampani, ukuba semngciphekweni kwiinkqubo zokhuselo ezazithathwa njengekhuselekileyo nge-110%, uhlaselo lwe -hlengo kwiikhompyuter nakwizixhobo eziphathwayo ... Kucacile ukuba eli xesha lolwazi lwedijithali, akukho sixhobo okanye umthetho okhuselekileyo kwaye akukho mntu ukhuselekileyo.
Izisongelo zokuqala zedijithali zaqala ukujikeleza kwii-90s kwaye ngokukhawuleza zaba sisixhobo esasihlala sihlangana naso ngenxa yolwandiso lwe-Intanethi. Ngama-90, i-antivirus yaqala ukuthandwa, i-antivirus ukuba nanamhla iyaqhubeka iyinxalenye ebalulekileyo yokhuseleko lweekhompyuter zethu. Kwimarike sinokufumana iintlobo ezahlukeneyo, zombini ezihlawulelwayo nezasimahla, kodwa kweli nqaku siza kugxila ekuboniseni ukuba ziyintoni eyona antivirus yasimahla.
1 Ngaba kuyimfuneko ukuba ne-antivirus?
2 Kutheni le nto iiWindows zineentsholongwane ezininzi kangaka?
3 Eyona antivirus yasimahla
3.2 I-Avast Antivirus
3.4 I-Avira yamahhala yeAntivirus
3.5 I-Sophos Home Simahla I-Antivirus yamahhala
3.7 Isimahla seKaspersky
3.8 Comodo Simahla Antivirus
4 Unqulo lwe-iPhone
Ngaba kuyimfuneko ukuba ne-antivirus?
Okokuqala kwaye ngaphambi kokuqalisa ukukhuphela nayiphi na intsholongwane, kufuneka siqwalasele ukusetyenziswa kwethu kunye nekhompyutha yethu. Ingakumbi kwiminyaka eyadlulayo Andiyisebenzisi intsholongwane kwaye namhlanje andikabuva ubunzima obunokubangela, kufuneka ulumke kancinci ngolwazi owabelana ngalo, amaphepha ewebhu owabonayo, iifayile ozikhuphelayo nalapho uzikhuphela khona, iifayile ozifumanayo imeyile (ungaze uvule ezo zinemvelaphi engaziwayo) ...
Ngale mithetho ilula, akukho mfuneko nangaliphi na ixesha ukufaka i-antivirus kwikhompyuter yakho, kuba into yokuqala eyenziwa zezi ntlobo zezicelo kukuba isantya sokusebenza ngokufanayo, kuba bayenziwa ngokuqhubekayo bezama ukufumana nasiphi na isoyikiso esinokubonakala.
Kutheni le nto iiWindows zineentsholongwane ezininzi kangaka?
Isizathu silula njengenani lezixhobo ezisebenzisa le nkqubo yokusebenza. Okona kukho iikhompyuter ngeWindows, amathuba okuba abe nakho ukosulela inani elikhulu leekhompyuter, yiyo loo nto i-Apple ecosystem, iMacOS, ihlala ithathwa njengeyona ikhuselekileyo, into engeyonyani konke konke, kuba iyachukunyiswa Ukuhlaselwa ziintsholongwane, i-malware kunye nezinye izinambuzane. Ekuphela kwento eyenzekayo kukuba njengoko zimbalwa iikhompyuter ezinale nkqubo yokusebenza, kunzima ngakumbi ukosulela inani elikhulu lazo. Zombini iiWindows, iiMacOS kunye neLinux zichaphazeleka kuhlaselo intsholongwane, akukho namnye kubo okhuselekileyo nge-100%, akukho nanye.
Kuya kufuneka siqale uluhlu nge-antivirus edityaniswe ngokwendalo ngaphakathi Windows 10, iantivirus egubungela uninzi lweemfuno zabasebenzisi ezingadingi iinkqubo ezinzima ukukhangela kwi-Intanethi, ukujonga udonga lwabo kuFacebook, ukuthumela i-imeyile engaqhelekanga ... Windows Defender isinika ukhuseleko kwintsholongwane, kwi-malware nakwi-spyware, ikhusela kwaye iskena icandelo le-boot lePC yethu, isinika ukhuseleko lwexesha lokwenyani kunye nokudityaniswa Windows 10 iyafumaneka simahla ngohlaziyo. Umdibaniso ngaphakathi Windows 10 kuthetha ukuba asisokuze siqaphele ukuba ihlala ikhona, ilawula yonke into esiyenzayo ukufumana nasiphi na isoyikiso esinokubakho.
Kwiminyaka yakutshanje u-Avast ebefumana isabelo sentengiso kwicandelo le-PC, enkosi ngokusebenza kakuhle kunye nezixhobo ezimbalwa ezifunwa sisicelo ukusinika ukhuseleko esilifunayo. Inguqulelo yasimahla ye-avast, Iinguqulelo ezihlawulwe ngokupheleleyo ziyafumaneka, ukukhusela kwiintsholongwane kunye ne-malware, ikhusela isikhangeli sethu kubusela obunokubakho benjini yokukhangela, ukongeza kuhlalutyo oluqhubekayo lonxibelelwano lweWi-Fi ukukhangela iingxaki ezinokubakho kwezokhuseleko ezinokuchaphazela umzila wethu kwaye ngenxa yoko inethiwekhi yonke. I-Avast Antivirus iyafumaneka kuzo zombini i-PC kunye ne-Android.
Khuphela iAvast antivirus
Ukusukela ngo-2016, i-AVG ibe yinxalenye ye-Avast, nangona zombini ii-antivirus zisasebenza kwaye zizimele kwimarike. I-AVG isinika ukhuseleko kwiintsholongwane, i-malware kunye ne-spyware kwi-PC, kwi-Mac nakwi-Android. Kwiinguqulelo zamva nje Ukufunyanwa kwalo naluphi na uhlobo lwe-malware kuphuculwe kakhulu, ngokuya ikhoyo kwi-Intanethi ukongeza ekunciphiseni inani lezixhobo ezifunekayo ukuze zisebenze ngasemva, obunye bobubi obubangelwa zezi ntlobo zezicelo.
I-Avira yamahhala yeAntivirus
Nangona iAvira yinkampani eye yazazisa kule minyaka idlulileyo ngenxa yendlela yayo emnandi yokulwa nentsholongwane, azizintsha kule ndawo, kuba Bazinikezele kukhuseleko lwekhompyuter ukusukela oko yaqalwa ngo-1988. Abasebenzisi abafuni kukhuselwa ngalo lonke ixesha ngalo lonke ixesha bejonga i-Intanethi, kodwa bafuna ukuyenza ngokungaziwayo kwaye kulapho uAvira eme khona kwabanye, kuba isinika inkonzo yasimahla yeVPN ukuze kungabikho mntu enye into iyayazi into esiyenzayo okanye siyeke ukuyenza kwi-intanethi.
Inguqulelo yasimahla yeAvira isinika ukhuseleko kwiPC yethu, kwiMac okanye kwisixhobo se-Android, ejongene nefayile ye- izoyikiso ngohlobo lweentsholongwane, i-adware, iTrojans, okanye ispyware. Ukusebenza kwayo ngasemva kuhamba ngokungakhathalelwanga, ke ngekhe siqaphele nangaliphi na ixesha ukuba sikhusela umzimba kwi-Intanethi.
Khuphela iAntivirus yasimahla
I-Sophos Home Simahla I-Antivirus yamahhala
I-Sophos, njengeComodo, yenye yezinto eziza kuqala kwintengiso ye-antivirus. Enkosi kuhlobo lwasimahla lweSophos, sinako khusela ikhompyuter yethu kulo naluphi na uhlobo lwentsholongwane, i-malware, ispyware kunye nasiphi na isicelo esibi. Ukongeza, ikwasikhusela kubuqhetseba bewebhu obuzama ukuzenza ezinye iiwebhusayithi ukuze sifumane idatha yomsebenzisi. I-Sophos iyafumaneka kuzo zombini i-PC kunye neMac, ikwasinika inguqulelo ye-Android eyenza imisebenzi efanayo nenguqulo yedesktop.
Khuphela iAntivirus yasimahla yasekhaya
Le nkampani yaseSpain iye yaba yenye indlela kule inkulu kwiminyaka embalwa edlulileyo, kodwa Ukulungiswa okungalunganga kwesicelo sakho sePC, Yayijika ukuba ibe sisinki sezixhobo zekhompyuter yethu, isenza ukuba kube nzima ukubanga ubuninzi kwiPC ngaphandle kokuyicima ngaphambili. Kwiminyaka embalwa kamva kubonakala ngathi bayithathile inqaku elifanelekileyo kwaye phakathi kweempawu zolu setyenziso umile apha ngentla ukuba ayicothisi ikhompyuter.
Ngokungafaniyo nayo yonke i-antivirus, iPanda ayisiniki sicelo sasimahla sokukhusela i-PC kunye nezixhobo ze-Android, kodwa kunokuba ungene kwi Inkqubo yenyanga yobhaliso, apho inyanga yokuqala isimahla ukuba sivavanye ukuba isebenza njani. Ewe iPanda Antivirus iyasikhusela kulo naluphi na uhlobo lwesoyikiso olufumanekayo kwi-Intanethi, into uninzi lweenguqulelo zamahhala ze-antivirus endizichazile kweli nqaku azenzi.
Zama iPanda Antivirus
UKaspersky ngomnye wamagqala kwihlabathi le-antivirus esingakwaziyo ukusikhankanya kweli nqaku. Inguqulelo yasimahla yale antivirus isinika ukhuseleko kwintsholongwane, ispyware, phishing kunye ne-malware, ukongeza ekubekeni iliso Ngamaxesha onke, nayiphi na ifayile esiyikhuphelayo kwi-Intanethi okanye esiyifumana nge-imeyile. Ukusetyenziswa kwezixhobo akubalulekanga ngokuthelekiswa nezinye izicelo. Ukuba sifuna ukwandisa imisebenzi esisinika yona, uKaspersky usinika ingxelo ekhuselekileyo yaBantwana, isicelo esiya kuthi sivumele abantwana bethu ukuba bahambe ngokukhuselekileyo kuzo zombini iikhompyuter kunye nezixhobo zabo ze-Android.
Khuphela Simahla iKaspersky
Comodo Simahla Antivirus
Njengokuba bekukho iindlela ezimbalwa ezikhoyo kwi-intanethi xa kuziwa ekukhuseleni ikhompyuter yethu, kumaxesha ngamaxesha kuvela umntu okhuphisana naye omtsha, kule meko uComodo, kunye nesicelo esifanelekileyo kubo bonke abasebenzisi abaneemfuno ezisisiseko, kodwa hayi loo nto ayisasebenzi ngokukuko. IComodo idibanisa uluhlu lweefemu apho abaphuhlisi abaseburhulumenteni (uluhlu olumhlophe) kunye nenye apho abaphuhlisi ngokubanzi banxulumene nolu hlobo lwesoftware (uluhlu olumnyama).
Zombini ezi zintlu zihlaziywa phantse yonke imihla ukubonelela ngezona ziphumo zibalaseleyo kwaye kuthintelwe okuhle. Enkosi kuhlalutyo lwe-heuristic, uyaqhubeka uzama Chonga naziphi na izoyikiso inokuvela kwikhompyuter yethu kwaye iyisuse.
Khuphela i-Comodo Free Antivirus
Njengoko ukwazile ukufunda kweli nqaku, akukho xesha ndikhankanyileyo ukuba naziphi na ezi zicelo ziyafumaneka kwi-Apple's iOS ecosystem. U-Apple uthathe umhlala phantsi nakuphi na ukusetyenziswa kolu hlobo kungaphantsi konyaka ophelileyo, kuba abanakho ukubonelela ngeenkonzo zokufumanisa intsholongwane, i-malware, ispyware kunye nabanye abathembisa kuba ekuphela kwendlela yokufaka usetyenziso kwisixhobo kukusebenzisa iVenkile ye App. , Abaphetheyo ngabaphathi babo kukuvuma izicelo eziza kufumaneka.
Ukuba yiVenkile yeApple ekuphela kwendlela yokufaka usetyenziso kwi-iPhone, i-iPad okanye i-iPod touch, akunakwenzeka ukuba naluphi na uhlobo lwesoftware lungene ngaphakathi olunokuchaphazela isixhobo sethu. Nangona kunjalo, ukuba kuyinyani ukuba ngamanye amaxesha yenzekile, kwaye inxenye yesiphoso yi-Apple yokungasivavanyi ngokupheleleyo isicelo, kungenxa yokusetyenziswa kwesicelo seXcode esingakhutshelwanga kwi-portal esemthethweni ye-Apple ukwenza isicelo , kodwa kwiiseva zangaphandle ezaziphethe ukongeza umgca kumdibaniso ngamnye owawenziwe ngeXcode kwaye wavumela ukufikelela okukude kwiziphelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » Eyona antivirus yasimahla
Iposi elungileyo kakhulu… Ndiyanitshela ukuba aninaso i-antivirus ebizwa ngokuba yi-360 iyonke yokhuseleko, eyi-antivirus elungileyo kakhulu ukongeza ekubeni ukhululekile!
I-Samsung 360 Round, ukuzibophelela kwiividiyo ezingama-360 zeengcali
INokia 7, ibanga eliphakathi leNokia entsha ngoku lisemthethweni